Digniinta Farmaajo Ka Dib, Sidee Ayay Soomaaliya Uga Falcelin Kartaa Faragelinta Imaaraadka? – Goobjoog News
Todobaadkii hore, dowladda Soomaaliya ayaa warqad dacwo oo ka dhan ah Imaaraadka u gudbisay jaamacadda Carabta, Warqaddan oo ay heshay Goobjoog News, ayna u xaqiijiyeen diblomaasiyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa waxaa ku xusan in ergada Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta ay dalbadeen in ajendaha kulanka Wasiirrada Jaamacadda Carabta ee Qaahira lagu daro qodob ku saabsan Dekadda Berbera iyo heshiiska Xaqdarrada ah.
Diblomaasiyadda: sida ay Goobjoog News u sheegeen ilo diblomaasiyadeed dal xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa soo jeediyay in uu kala dhex-galo Muqdisho iyo Abu-dhabi, waa fursad xiisadda loogu dhameyn karo qaab diblomaasiyadeed.
Baarlamaanka: Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo Goobjoog News la hadlay waxaa uu qabaa in baarlamaanku uu ka hadlo heshiisyada sharci-darrida ah ee Imaaraadka isaga oo intaas raaciyay in ay ku xad-gudbeen qarannimada Soomaaliya. Dalxa waa uu ka hadlay in soojeedinta ka hadlidda Imaaraadka ay ka iman karto xukuumadda ama baarlamaanka gudihiisa, isaga oo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in loo baahan yahay in laga hadlo dhammaan heshiisyada sharci-darrida ah ee la galay sida kan Dekedda Boosaaso.
Somaliland Oo Dhulkeeda Ka Mamnuucday Isticmaalka Domain-ka ".so"